Oli Nnukwu Oliv - Imewe Mmewe
Tiuzdee 14 Juun 2022
Nnukwu Oliv A na-atụgharị uche OLI, ihe dị ntakịrị ihe na-ahụ anya dabere na ọrụ ya, echiche nke ikpu olulu na-esite na otu mkpa. Ihe omume a mechara kwupụta ọnọdụ nke ọnọdụ dị iche iche, ajọ njọ nke olulu na mkpa iji bulie ịma mma nke olive. Dika ihe eji eme ihe eji eme ihe aburu, ejiri kee Oli ka okwesiri mepee ya iji mesie ihe ijuanya. Ejiri mmụọ nke onye okike mee mmụọ nsọ ya na ịdị mfe ya. Nhọrọ nke ahihia nwere gbasara uru ihe ya bara na uru ya.
Aha oru ngo : Oli, Aha ndị na-emepụta ya : Miguel Pinto Félix, Aha onye ahịa : MPFXDESIGN.
Mbọsị Ụka 12 Juun 2022
Bakeware, tableware, ihe ọ drinkụ drinkụ na cookware imewe
Nnukwu Oliv Miguel Pinto Félix Oli